Facebook: fiidiyowyo loogu talagalay sahamiyayaal - Geofumadas
Nofeembar, 2010 AutoCAD-AutoDesk, topografia
Gudaha iyo xuduudaha Facebook waxay noqonaysaa aalad guud oo ganacsi iyo ujeeddooyin waxbarasho laga dhigto. Maaddaama ay tahay "Internetka dadka", shirkaduhu waxay dib u eegeen dadkan fara ku tiriska ah ee isku xidhan, taas oo siisay qiimo ka baxsan shabakadda bulshada ee caadiga ah. Mid ka mid ah astaamaha ugufiican ayaa ah awooda lagu dhajin karo fiidiyowyada, waxaan jeclahay sahlanaanta inaan ku daawado iyaga oo xallin sare leh oo aan ku calaamadeynayo. Munaasabaddan waxaan ku tusayaa tusaale danta aan u leenahay adeegsiga qalabka CAD ee aagga injineernimada, tan ugu wanaagsan ee aan soo arkay tan iyo markii aan sameeyay dib u eegista AUGI. Waa Ururka Baadhitaanka ardayda ee Jaamacadda Madaxa Bannaan ee Santo Domingo (UASD), sida muuqata fikradda weyn ee qofku, in ka badan horumarinta bulshada iswaafajinta ayaa hubaal ka heleysa adagtada iyada oo la wadaagayo waxyaabaha tayadaas leh oo ah shaqooyinka ugu badan ee shaqada fasalka ah iyo kuwa kale ayaa ah jawaabaha bulshada AUGI.
Ilaa hadda waxaa jira waxyaabo badan oo ka mid ah fiidiyoowga 30 oo layliyo lagu sharraxay talaabo talaabo talaabo ah, badanaaba leh maqalka iyo dulqaadka ilaa laga kabsado qaar ka mid ah.
Isku hagaajinta sawirada, waa gudaha saddex qaybood leh codka asalka ah. Waxaa ka mid ah fikradaha aasaasiga ah sida adeegsiga shaqooyinka si loogu beddelo darajooyinka, daqiiqadaha, ilbiriqsiyada radianska, iyo trigonometry-ka aasaasiga ah.
Xisaabinta shabakadaha hiddaha iyadoo la adeegsanayo AutoCAD Civil 3D 2011. Aad u cad oo muujinaya khasaaraha nidaamka tuubbada.
Naqshad jidka iyadoo la adeegsanayo Wadooyin Sare, oo ah barnaamij bilaash ah. Waxay ku jirtaa afar kalfadhi, iyo in kastoo software-ka xoogaa duug ah, weli wuu nool yahay oo aad ayuu u awood badan yahay. Waxaa lagusoo bandhigayaa culeyska daruuraha, qotominta jiifka ah, qaabka safka fasalka, iyo calaamadeynta qorshaha.
Falanqaynta dusha ee 3D ah. Waxaa ka mid ah go'aaminta dooxooyinka iyo khariidadda dhaadheer.
Falanqaynta macluumaadka daraasadda hordhaca ah iyadoo la adeegsanayo Eagle Point iyo soo dejinta saldhigga sarreynta ee csv Google iyagoo isticmaalaya Digipoint Zonum.
Naqshad jidka iyadoo la adeegsanayo 3D Madani laga soo qaado faylka csv. Waxaa ka mid ah jiilka aagga dusha sare, qaabeynta jiifka iyo jiilka warshad muuqaal. Tani waa tan ugu fiican, waxaa jira wadar ahaan 9 kalfadhi oo ay kujiraan qaabeynta qaybta caadiga ah iyo jiilka marinka.
Fiidiyowyada kale waxaa ka mid ah:
Xisaabinta aagga iyo shaxda koorsada isticmaalka qalabka HW
Abuur dusha sare isticmaalka AutoCAD 3D Madani
Samee dusha isticmaalka DEM USGS
Ka saar dhibcooyinka COGO ka waddo
Naqshad horudhac waddo hoos u dhac Xirfadda heerka Google Earth ilaa 3D madaniga ah.
Calaamadeyn ee isku-xireyaasha waqooyiga iyo bariga mitir kasta 20
Aqoonsiga heerarka heerarka heerarka 3D Land Desktop. Wax la mid ah ayaa lagu arkay fiidiyow kale oo laga qaado 'Eagle Point' ee 3D madani ah iyo sidoo kale miisaanka Global DEM xagga madaniga 3D
Madadaallada 3D madaniga ah plugins de 3D Studio Max.
La Chascada: Haddii aad u maleyneysay in Facebook uu yahay mawjad loogu talagalay carruurta jiifta da'dooda dhabta ah inay yiraahdaan wax aan jirin markii ay ka tagayaan fasallada, waa inaad iska hubisaa maxaa yeelay haddii aad rabto inaad aragto fiidiyowyada waa inaad isdiiwaangelisaa. Halkaas ayaan kugu arki doonaa. Sidoo kale waxyaabahaas nolosha ku jira, ee maanta jira oo aan berri ahayn, ma xuma in aad kala soo baxdo fiidyowyada.
Post Previous" Hore ... maalmo ma doonayo inaan dhaafo ...
Post Next Waa maxay Teamviewer - Ugu fiican taageerada fogNext »
4 Jawaabo "Facebook: Fiidiyowyo loogu talagalay sahaminta"
Ing. Ambiorix Tejada C isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan boggan u eegayaa sahamiyeyaasha, waana mid aad u xiiso badan, hambalyo
JOSE ANTONIO MENDOZA isagu wuxuu leeyahay:
Waxay ku siin karaan MAGACA SIDA AAD KA QAADEYSAN KARTAA WAQTIGA
Igor Risso Rodriguez isagu wuxuu leeyahay:
Koorasyo ​​aad u xiiso badan, gaar ahaan waxsii sheegyadani in mar walba wax cusub
Armando Antonio Vargas Fuertes isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa inaan wax ka barto boodhadhka aad daabacanto, mahadsanid. Salaan